Kaadị ozi ihu igwe ọhụrụ maka Google Ugbu a | Gam akporosis
Nova Launcher melite ọtụtụ obere mgbanwe [Download APK]
Ihe ngosi ohuru nke Nova Launcher na-enweta ezigbo obere mgbanwe nke ga-apụta na nsụgharị ọhụrụ mgbe a tọhapụrụ ya na Storelọ Ahịa Play. Ma, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtụ anya ịnwale mgbanwe ndị ahụ, mgbe ahụ anyị ga-agafe gị njikọ kpọmkwem na APK nke TeslaCoil keere nke mere na ndị ọrụ nwere ike nwalee uru nke ụdị ọhụụ a ruru nọmba 3.0 ga-eweta.
Nova Launcher bụ otu n'ime ngwa ntanetị kachasị mma n'ebe ahụ na therelọ Ahịa Play. Ya kasị elu mma bụ nanị na-enye a customizable launcher na-enye ezuru gị ka na-arụ ọrụ zuru oke n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdụ ọ bụla na-enweghị ọtụtụ fanfare na interface na ndị ọzọ. E wezụga eziokwu na anyị na-eche ihu otu n'ime ngwa ndị ahụ a na-emelite kwa oge ọ bụla, yana nke dị n'oge afọ 3 gara aga, ụdị a nke 3.0 bụ otu n'ime ndị kachasị ukwuu nke ewepụtara. Yabụ ọdịdị nke APK a na beta emeghe na-enye gị ohere ịnwale nke ọ bụla ọhụụ ọhụụ, nke, ọ bụ ezie na ha ewetaghị mgbanwe dị egwu, ga-enye gị ohere ịhazi desktọọpụ gị karịa.
Site na mgbe i tinyere Nova Launcher 3.0, ị nwere ike hazie ederede mkpirisi na agba na onyinyo ịchọrọ, ebe wijetị nwere ike ịnwe ntọala dị iche iche.
Enwere ike iji mmegharị ahụ na folda iji rụọ ọrụ dị iche iche ma enwere ụdị nhọrọ Honeycomb ọhụrụ maka ebe nchọta ahụ. Ngwa drawer bụ ebe ọtụtụ si abịa nke obere akwụkwọ akụkọ ọhụrụ, dị ka aha ngwa a nwere ike ịhazi, agba ọ bụla na ala nke otu dị iche iche na taabụ, yana ngwa ndị ga-apụta site na mmanya igodo na gam akporo 4.4 KitKat.
Maka ndị ọzọ, enwere ezi ndozi nke uzo di iche iche dị ka HTC, Samsung na Motorola Droid ntị. Iji budata APK ị ga-aga nke a njikọ, ma gi onwe gi nwekwara ohere isonye na mmemme Google Play beta nke Nova.
Site njikọ a i sonye na obodo Nova beta, nke a ọzọ iji gosi na ị chọrọ ịbụ onye nyocha na ihe niile ị ga - eme bụ ịga Storelọ Ahịa Play iji melite ngwa ahụ na beta. Ugbu a oge ọ bụla Nova na-emelite ị nwere ike iji Storelọ Ahịa Play ka nwere ihe kacha ọhụrụ beta version.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » APK » Nova Launcher melite ọtụtụ obere mgbanwe [Download APK]
Aghọrọ m onye nyocha mana ọ na-ajụ m ịzụta nke mbụ maka ọrụ niile, ọ dị mma?
Etu esi etinye ngwa ahụ
Kaadị ozi ihu igwe ọhụrụ maka Google Ugbu a
LG G3 bụrịrị gọọmentị, anyị na-egosi gị nkọwa ya niile